Tababare U Mahadnaqay Kooxdiisii Oo Shaqada Ka Eriday
HomeWararka MaantaTababare U Mahadnaqay Kooxdiisii Oo Shaqada Ka Eriday
Tim Sherwood oo tababare ka ahaan jiray Tottenham ayaa shaqada laga caydhiyey, iyadoo go’aankaasna uu si shakhsi ah u qaatay guddoomiyaha kooxdaas ee Daniel Levy xagaagii hore.
Sherwood oo ay da’diisu tahay 46 jir, ayaa isla markii shaqada laga eryey waxa uu la wareegay kooxda Aston Villa oo uu tababare ka noqday, waxaana maalinta Sabtida ay u noqon doontaa mid xasuus badan, marka ay Aston Villa iyo Tottenham ciyaar ka tirsan Premier League ay garoonka White Hart Lane isaga hor iman doonaan. Waa markii ugu horreysay ee Sherwood uu dib ugu laabto garoonka Tottenham, waxaana laga filayaa dareemo iska soo horjeeda in lagu qaabilo.
Inkasta oo uu doonayey in uu shaqadiisa sii wato markii uu tababaraha ka ahaa Tottenham, haddana Sherwood waxa uu ugu mahadnaqay kooxda woqooyiga London ka dhisan ee Tottenham in ay caydhiyeen, taas oo uu tilmaamay in ay u saamaxday in uu tababare ka noqdo Aston Villa.
Tim Sherwood oo warbaahinta la hadlay, ayaa waxa u hadalkiisa ku bilaabay: “Tottenham waa koox wanaagsan, si fiican ayaanay iila dhaqmeen in ka badan sannad oo aan la joogay. Halkan Aston Villa tababare kamaan ahaadeen haddii aanan soo tababari lahayn Tottenham Hotspur.
“Hadda waxaan haystaa koox kubadda cagta ah oo ixtiraam badan ii haysa, wax kasta oo aan karana waan u hurayaa Aston Villa kulanka Sabtida.” Sidaas ayuu yidhi Sherwood.
Macallinkan ayaa waxa uu si kal iyo laab ah ugu mahadnaqay guddoomiyaha iyo madaxda sare ee Tottenham oo uu ku tilmaamay in go’aankii ay shaqada kaga caydhiyeen uu ahaa mid isaga shakhsiyan faa’iido u yeeshay.
All Goals and Highlights: Moreirense 1 – 2 FC Porto
Leeds United vs QPR – Goals and Highlights